TAARIIKH KOOBAN EE MARTIN ADLER. - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Taariikh kooban ee suxufi Martin Adler
TAARIIKH KOOBAN EE MARTIN ADLER.
Publicerat lördag 24 juni 2006 kl 17.51
Adler oo degenaa magaalada Västerås ayaa marar badan wuxuu ahaa suxufiga ugu horreeya goobaha ey dhibaatooyinka iyo masiibadu ka dhacaan.
Bishii Maajo ee sannadkii 1994-tii ayuu wargeyska maalinlaha ee Expressen ku soo daabacey toban beej sawirro la xiriira xasuuqii ka dhacey dalka Ruwaanda.
Sidoo kale wuxuu warbxinno kala duwan ka soo diriey carriga Jejeeniya, Kashmiir, Siri Laanka iyo Boosniya, wakhtiyadii kala duwanaa ee dagaaladu ka socdeen.
Waa mid lala fajaco inuu goobo sidaa u ololaya naftiisa ku aamino isaga oo aan heysan ammaan buuxa.
Wareysi uu siiyey Amnesty Press ayuu sannadkii hore kaga warbixiyey hoowlihiisa suxufinimo ee uu ka soo qabtey dagaalo ka socdey 20 goobood ee ku kala yaala 40 dal.
Martin Adler wuxuu mar walba raadin jirey waxa uu ugu yeerey ”god madow” ee ku yaala qariidada adduunka.
Islamarkaana uu goolkiisu ahaa carriga Suudaan iyo Koongo.
Sannadkii 2001-dii ayaa Martin Adler iyo saddex suxufi ee u dhammaantood u dhashey dalka Iswiidhen waxaa lagu qafaashey , laguna dhacey iyaga oo howl ka gudanaya dalka Afgaanistaan. Muddo yar dabadeedna goobtaasi lagu diley Ulf Strömberg oo ka mid ahaa suxufiyiintaa.
Adler maaheyn markii ugu horreysey ee uu booqasho ku tago Soomaaliya, iysaga oo markanna ka howlgalayey bannaanbax ey isugu soo baxeen, islamarkaana lagu muujinayey in markii ugu horreysey muddo s15 sannadood ah ey nabadi ka islaaxdey Muqdisho.
Inkasta oo khatarta ammaanku ka wanaagsaneyd markii loo eego safarradii hore ee uu Soomaaliya ugu tagey. Haddanna nasiibdarro maalintii Jimcadii ayuu Martin Adler ku naf waayey bannaanbax ka dhacayey garoonka Terebuunka ee magaalada Muqdisho.
Martin Adler wuxuu ku guuleystey biladda abaalmarinta suxufiyiinta ee heyadda caalamiga ah ee Amnesti. Taasina oo uu ku muteystey barnaamij la xiriirey ka ganacsiga bani’aadanka ee dalkaasi Shiinaha.
Sannadkii 2004-tiina wuxuu ku guuleystey biladda Rory kadib filim uu ka sameeyey ciidamadda Mareeykanka ee magaalada Samara ee dalkaasi Ciraaq.
Martin Adler wuxuu ku barbaarey magaalada Västerås. Hooyadii waxey ka soo jeedaa boqortooyada ingiriiska, halka aabbihiina yahey iswiidhish.
Wuxuu waxbarashadiisa ku qaatey magaalada London, maadada Antropologi ”cilmiga barashada jinsiyadda bani’aadamka”. Markaasi kadibna isaga oo u wareegey suxufinimada.
Adler wuxuu ka tagey laba hablood iyo hooyadood. Da’diisuna 47 sannadood.